Dalka Ingariiska Wasiirad lagu heesto Kulan Qarsoodi ah oo la yeelatay Israel.. – Allpuntlander.com
Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ee dalka UK Ms.Priti Patel ayaa laga cabsi qabaa inay xilkeeda ku weyso kulamo qarsood ah oo ay la yeelatay Madaxda Israel, haweenaydan ayaa kamid ah xubnaha xiriirka dhow laleh maamulka Yahuuda.
Wasiirada ayaa ka qarisay dowlada iyo Wasaarada Arrimaha Dibada kulamo ay si shaqsi ah ulla yeelatay Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu xili ay fasax ku joogtay Israel, waxay sidoo kale qarisay kulamo kale oo ay la yeelatay saraakiil ka socda maamulka Israel kulamadaasi oo dhacay bilihii Agoosto iyo September.
Kulamadan ayaa ah sharci daro ka horimaaneysa xeerka u yaal Golaha Wasiirada ee dalkaasi UK, iyadoo Wasiirada Isniintii looga yeeray Xafiiska Raysalwasaare Theresa May oo ku canaanatay Wasiiradaasi khaladka ay gashay.
Balse Salaasadii shalay ayey warbaahinta UK soo bandhigeen in Wasiirada ay kulamo dheeraad ah la yeelatay xubno ka socda Israel, kulamadaasi oo laga qariyey dowlada UK, arrintan oo cirka kusii shareertay fadeexadan heysata Wasiirada.
Wasiirada oo hada safar shaqo ku joogta dalka Ugandha ayaa maanta oo Arbaca ah gelinka danbe lagu waday inay kulamo la yeelato madaxda dowladaasi, walow kulamadaasi hada la sheegay in la joojiyey.
Warbix Dagaal Aan Saaka Waxba La Iskula Harrin Oo Ka dhacay Bariga Gobalka Mudug Godad